Accueil > Gazetin'ny nosy > Depiote sy Governemanta: Hanao sinema ao Tsimbazaza indray rahampitso
Depiote sy Governemanta: Hanao sinema ao Tsimbazaza indray rahampitso
Rahampitso zoma faha 24 novambra 2017 no voalahatra fa hihaona indray ny depiote sy ny mpikambana ao amin’ny governemanta tarihin’ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier. Fifanatrehana mahakasika ny fanatanterahan ny PND (Tetikasam-panjakana momba ny fampandrosoana) no hatao amin’izany, araka ny voalazan’ny lalàna.
Raha ny fahitana ny fihetsik’ireo depiote eny Tsimbazaza hatramin’izao dia tsy misy zava-dehibe hifanazavana intsony ao satria efa mitovy ny tadin-dokangan’ny roa tonta amin’izao fotoana izao. Ny raharaha mahakasika ny fandaniana ny volavolan’ny tetibolam-panjakana ny taona 2018 iny no isan’ny zavatra lehibe indrindra tokony hipetrahan’ny ady hevitra, izay antoka ny fampandrosoana ny firenena nefa dia iny lany tsy nisy ady hevitra iny ity raharaha ity teo anatrehan’ny depiote ireto. Milaza tokoa ny depiote nandany azy ireo fa tena tsara hono iny teti-bola iny. Rehefa ingahy Zafimily Costance sy ny namany no miteny izany, dia inona koa no ady hevitra satria izy ireo no manana traikefa be amin’izany ao amin’ny Antenimierampirenena ity.
Raha ny zava-misy hitranga araka ny fahitana ny raharaha ao dia ny fisehoana amin’ny fahitalavitra hataon’ny depiote amin’ny olona nifidy azy sisa. Tsy maintsy hilaza ny zavatra mba takian’ny mponina any aminy izy ary hampiseho fa manao ny asany ara-dalàna eo antrehan’ireo vahoka nifidy azy ireo koa.
Inoana fa tsy hisy ny tena fanontaniana sy ny fahalalana ny marina amin’ny asa fampandrosoana nataon’ny governemanta ary tsy hisy koa ny fanontaniana mahakasika ny tombotsoam-pirenena izay tokony ho filamatr’izy ireo. Efa azo ny 4X4, efa nandeha tany ivelany avokoa ny depiote, efa azon’izy ireo avokoa ny zavatra notadiavin’izy ireo tamin’ny fanjakana. Resaka sinema na sarimihetsika sisa no hatao ao. Efa tsy misy depiote mpanohitra intsony eto Madagasikara raha ny fahitana ny zava-misy ao Tsimbazaza ao fa sinema no ataon’izy ireo sisa. Fanomanana ny hiverenany amin’ny fitondrana indray no zava-dehibe izao fa tsy ady hevitra amin’ny governemanta intsony.
Mahanjanga: Tovolahy iray maty novonoina tamin’ny fomba feno habiabiana
Nivarahontsana ny mponina tao amin’ny fokontany Aranta ao Mahajanga, N talata lasa teo. Tovolahy iray, tokony ho 30 taona eo ho eo, no maty nisy namono tamin’ny fomba feno habiabiana, tao amin’io fokontany io. Raha ny fantatra dia mpiasa lakana sy mpivarotra filao ity lehilahy tanora nisy namono ity ary ao amin’ny fokontanin’i Mahavoky no misy ny trano fonenany. Marihana fa ireo ankizy sendra nilalao teny amoron-dranomasina tao Antsahabingo no nahita ny razana, omaly maraina tokony ho tamin’ny 10 ora. Feno tsatoka vy maranitra moa ny lohany iray manontolo ka izay no nahafaty azy. Efa eo am-peletanan’ny mpitandro filaminana any an-toerana moa ny raharaha amin’izao fotoana izao.